Posted in အိမ်ပြောင်းခြင်း Posted by လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် on Monday, 26 March 2012 at 04:53
ဘလော့ဂ်ဂါ မောင်နှအပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်အလုပ်များပြီး အွန်လိုင်းသို့ အချိန်မှန်မှန်မတက်နိုင်သောကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ အိမ်များသို့
အရောက်နည်းနေသည့်ကြားက ပြဿနာနောက်တစ်ခုက ထပ်တက်နေပါတယ် အကြောင်းရင်းကတော့
ဆိုဒ်ကို ကလိတာများသောကြောင့်လားမသိ ၀ဲနဲနဲကိုက်နေသောကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ အိမ်များဝဲကူးမည်စိုးသောကြောင့် လာရောက်မလည်ပတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ဆိုဒ်အသစ်တစ်ခု အလျင်အမြန်လုပ် အထပ်ထပ်ဝဲစစ်ကာ ယခုတော့ စိတ်ချလောက်ရပြီထင်လို့ အိမ်ပြောင်းပါတော့မည်။
ဆိုဒ်ကို အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် လင့်ပြောင်းရသည်ကိုလဲ အလွန်အမင်းပဲ အားနာမိပါသည်။အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြောင်းရခြင်းကြောင့် ကျွန်တော့်အပေါ် နားလည်ပေးနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်မိပါသည်။ သူငယ်ချင်းတို့ ချိတ်ထားသော ဒီလင့်ကို ဖျက်စေချင်ပါသည်။လင့် အသစ်http://sabailwinpyinhlaing.blogspot.com/ ကိုလဲ ကျေးဇူးပြုပြီးပြန်ချိတ်ပေးစေချင်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းတို့လဲ မိမိဆိုဒ်ကို ၀ဲစစ်ချင်ရင်တော့ သာမက်ကလေး မောင် (စွယ်စုံကျမ်း)ဆီမှ ခွင့်မတောင်းပဲ ကျွန်တော်ယူလာသော ဆိုဒ်လင့်လေးကို
ထားခဲ့ပါတယ် http://sitecheck.sucuri.net/scanner/ ဒီမှာစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အိမ်သစ်လေးကို လာရောက်ဝေဖန်ပေးကြပါအုန်းနော်
Posted in ကဗျာ Posted by လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် on Thursday, 22 March 2012 at 00:58
Posted in ကဗျာ Posted by လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် on Sunday, 18 March 2012 at 10:57
Posted in မွေးနေ့ လက်ဆောင်ကဗျာ Posted by လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် on Friday, 16 March 2012 at 06:11
တိမ်တို့ သခင် အိန်ဂျယ် သင့်က
(၁ရ.၃.၂၀၁၂ မှာ ကျရောက်သော ဘလော့ဂ်ဂါ မိုးငွေ့၏ မွေးနေ့ပွဲအတွက် ကဗျာလက်ဆောင်)
Posted in ပေါက်ကွဲခြင်း Posted by လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် on Monday, 12 March 2012 at 23:01
အခုတလော အလုပ်တွေမအားလပ်သောကြောင့် အွန်လိုင်းသို့ သိပ့်မတက်ဖြစ်ပေ။ ထို့ကြောင့် အချိန်ရလျှင် ဆိုဒ်လေးနှင့် သူငယ်ချင်းများရဲ့ စာကိုသာဖတ်ဖြစ်ပြီး ၀င်လာသောမေးလ်များကိုပင် မစစ်မိခဲ့ပေ ကျန်ခဲ့တဲ့ sundayကတော့ အလုပ်လဲ နဲနဲပါးတာနဲ့ မေးလ်တွေကို စစ်ရင်းက မီးအိမ်ရှင်များဆိုဒ်မှ ရှယ်ထားသော မေးလ်မှ
ခေါင်းစဉ် တစ်ခုကို အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရသည် ခေါင်းစဉ်လေးက "ရိုးရိုးလေးပဲချစ်တယ်"ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ ဒါနဲ့ ငါ့ကဗျာခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ တူပါလားဆိုပြီး ဘယ်သူများရေးထားပါလိမ့် ငါလဲတင်မထားပါဘူး
ခေါင်းစဉ်များတူနေလို့ဆိုးပြီး သိချင်စိတ်များလာတာနဲ့ မီးအိမ်ရှင် ဆိုဒ်လေးသို့ ၀င်လိုက်ရာ ကဗျာလေးက ကျွန်တော့်ကဗျာပါပဲ ဒါပေမယ့် ရေးသားသူနေရာမှာတော့ ထိုဆိုဒ်မှ အက်မင်လုပ်နေသော Maythဆိုသူဖြစ်ပါသည်။ ကော်ပီကူလာသာကိုရေးဖို့များ ကျန်နေတာလားဆိုပြီး ကော့မက်တွေလိုက်ဖတ်လိုက်တော့ ဒီပို့စ်ရေးဖို့ဖြစ်လာတာပါပဲ ကော့မက်မှာ ထိုအက်မင် Myathက ဒီလိုလေးရေးထားပါတယ်
ရေးသားသူ Mayth 10 hours ago
ကော့မက်လေးကိုမြင်တော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ် ကဗျာကြိုက်လို့ ကူးတင်တာ ၀မ်းသာပေမယ့် သူရေးထားပါတယ်ဆိုပြီး အရှက်တရားကင်းမဲ့တဲ့ သူ့လုပ်ရပ်အတွက် သူ့စာပေအဆင့်အတန်းကို ကျွန်တော်နားလည်ပြီး ပို့စ်အောက်မှာ ယဉ်ကျေးစွာပဲ
ရေးသားသူ လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် အခုလေးတင်
http://sabailwinpyin.blogspot.com/2011/10/blog-post_02.html ကဗျာကို ပြန်တင်လိုလျှင်ရေးသားသူနှင့် ဆိုဒ်နာမည်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပါ ဒီကဗျာကို ကျွန်တော် နိုင်းဆိုဒ်တော်တော်များများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်မှာတင်ထားသော ကိုယ်ပိုင်ရေးကဗျာဖြစ်ပါသည် ။ကျေးဇူးတင်ပါသည် http://www.edinooyin.com/forum/topics/4347155:Topic:3758339
ဒီလိုကော့မက်ရေးပြီး ပင်မစာမျက်နှာကို လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့ T0P 10 မှာ
ကောင်မလေး....သို့ (ခေါင်းစဉ် အမှန် ကောင်မလေး) ဆိုတဲ့ ကဗျာတွေကို ထပ်တွေ့ ၀င်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ အပေါ်က ကဗျာအတိုင်းပဲ သူရေးသားထားသည့်အတိုင်းပဲ ဖောဖောပဲ ကော့မက်တွေရေးထားတယ် ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ အပေါ်ကအတိုင်း ကော့မက်ပေးမယ်ဆိုပြီး (စာရေးပျင်းသောကြောင့်)ကော်ပီကူးရန် သွားကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ပေးထားသော ကော့မက်မရှိတော့ပါ ကော့မက်ကိုဖျက်လိုက်ပါပြီ ဒါနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိနေတုန်း ဆိုဒ်တာဝန်ရှိသူကို အကြောင်းကြားရန် စာရေးပြီး လင့်တွေသွားကူးတော့ အရမ်းတော်တဲ့ အက်မင် စာသူခိုးက ပို့စ်တွေကိုပါ ဖျက်လိုက်ပါပြီ
အားလုံးကို လမ်းစဖျောက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ ဒါပေမယ့် သူမသိသေးတာတစ်ခုက ကျွန်တော်ပို့တချို့ကို ကူးပြီး မေလ်းထဲမှာ သိမ်းထားတာဆိုတာပါပဲ။နည်းပညာ ဆင်းရဲသောကြောင့် ကောင်းကောင်းမကူတတ်ပေမယ့် ကူးတတ်တဲ့အတိုင်းပဲ ကူးထားလိုက်ရတယ်။
ကျွန်တော် ခံစားရတာကတော့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အချိန်အများကြီးယူရတယ်
အများကြီးခံစားရတယ် ကဗျာလေးတစ်ကြောင်းရဖို့ မအားလပ်တဲ့ကြားက စာရွက်နဲ့ဘောပင်ကို
အိတ်ထဲထည့်ထားပြီး တစ်ကြောင်းရလိုက် တစ်ကြောင်းမှတ်လိုက်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ခံစားချက်တွေကို သူ ကတစ်မိနစ်တောင်မကြာပဲ လွယ်လွယ်ကူးပြီး ယူတင်လိုက်တယ် ဘယ်လောက်များ စာပေတန်ဖိုးကို နားမလည်လိုက်လဲ ဒါနဲ့များ အက်မင်လုပ်တယ်တဲ့ တာဝန်ရှိသူကိုပြောတော့လဲ ဘာမှ အရေးမကြီးသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော် နိုင်ဆိုဒ်အများကြီးမှာ စာရေးဖူးပါတယ် စာရေးနေပါတယ် ဒီလို ကိစ္စကတော့ အခုမီးအိမ်ရှင်ဆိုဒ်က အက်မင်နဲ့မှ စတင်ကြုံဖူးတာပါ။
ထိုအက်မင် စာမျက်နှာမှာ ကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့သမျှ ကျွန်တော့်ကဗျာများမှာ
စသည့်အနည်းငယ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ဘယ်လောက်တောင်များကူးပြီ ဘယ်လောက်တောင်ပြန်ဖျက်လိုက်လဲတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိပါ။
ကျန်နေသေးတဲ့ ကဗျာခေါင်းစဉ်များကို သူမ၏ စာမျက်နှာ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု့များထဲမှာ ရှာနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ မိမိခံစားချက်တွေ အလွယ်တကူ အရှက်မရှိကူးယူနေတဲ့ ရန်မှကင်းဝေးကြပါစေ။
အောက်မှာ ကူးထားတဲ့ စာမျက်နှာလေး ဖော်ပြထားပါတယ် ။
*Aldiotis*ရဲ့ Demo Album mp3 သီချင်းများ
တက်သစ်စအဆိုတော်သီဟဆောင် သီချင်းများနဲ့ အင်တာဗျူး
တက်သစ်စ၀ါသနာရှင်အဆိုတော်MC thatpaing သီချင်းများ
တက်သစ်စအဆိုတော် MC Paing lay mp3 သီချင်းများ
တက်သစ်စ၀ါသနာရှင်အဆိုတော် zay yar သီချင်းများ
ပိုပို ( ၀က်ကလေး ) သီချင်းများ
ရေးသားသူ Mayth ထည့်သွားတာက မတ်စ် 10, 2012 အချိန် 8:25pm ကပါ
စာပို့ မယ် ကြည့် မယ်ရေးသားထားမှုများကို
နင်တိုက်လို့ လှုပ်သွားတဲ့ ငါ့နှလုံးသားကတော့
ငါနဲ့ ငါနှလုံးသားလေးပဲ သိတယ်
အချစ်ဆိုတာ ပြောရလွယ်တဲ့ စကားမှန်
အတ္တတွေ မာနနဲ့ တပ်မက်မှု့
ကြည့် ရှုမှု: 51 ကြိမ်ရှိပါပြီ အမှတ်သား: ကဗျာ
< နောက်ကပို့ စ်ကိုကြည့် မယ်
ရှေ့ ကပို့ စ်ကိုကြည့် မယ် >
မှက်ချက်ပေးမယ်။ ။(မှတ်ချက်ပေးရာတွင် ညစ်ညမ်းပုံများ မိုက်ရိုင်းသောစာများမပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်)
ရုပ်ပြောင်လေးများသုံးရန်နှိပ်ပါ: | နောက်ထပ်
http://sabailwinpyin.blogspot.com/2011/10/blog-post_02.html ကဗျာကို ပြန်တင်လိုလျှင်ရေးသားသူနှင့် ဆိုဒ်နာမည်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပါ ဒီကဗျာကို ကျွန်တော် နိုင်းဆိုဒ်တော်တော်များများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်မှာတင်ထားသော ကိုယ်ပိုင်ရေးကဗျာဖြစ်ပါသည် ။ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ရေးသားသူ ခိုင်သဇင် 42 minutes ago
ရေးသားသူ လမင်းငယ် 1 hour ago
ရေးသားသူ ဆုလဲ့မင်း**5hours ago
အရမ်းကောင်းတယ်မေလေးရေးးးးးးးးးးးးးးးး အားပေးသွားတယ်နော် ချစ်သူလေးနဲ့အတူထာဝရပျော်ရွှင်ပါစေ
ရေးသားသူ အပြာရောင်ချစ်သူ 10 hours ago
တောင်တယ်ဝေးးးးအက်မင်မမကတော်တယ်...နောက်တခါကျရငိမုန်ဝယ်ကျွေးမယ်နော် အခုတော့ ပိုက်ဆံချီးပါနော်..လိုင်းကြေးပေးဖို့ မရှိလိုပါ..ဟိး..ဟိး...
ရေးသားသူ မင်းလွင် 10 hours ago
အားပေးသွားပါတယ် ခင်ဗျ :)
ရေးသားသူ kgma4 10 hours ago
ရေးသားသူ အယ်လေးငယ် 10 hours ago
လေတိုက်လို. သစ်ရွှက်လုပ်တာ ခလေးလူကြီးအားလုံးသိတယ် နင်တိုက်လို. လူပ်သွားတဲ.ငါ.နှလုံးသားတော. ငါနဲ.ငါ.နှလုံးသားပဲသိတယ် တကယ်ကောင်းတယ် အဲ.စာသာားလေးကြိုက်တယ် မေးလေးချစ်သူအာပေတူးနဲ.အတူ--ပျော်ရွှင်ပါစေနော်--သူငယ်ချင်းလေး
သူငယ်ချင်းများ – ဖိတ်ခေါ်မယ်
mieinshin created this Ning Network.
******* နောင် မှ ရ မိသော နောင်တ *******
ပျော်ရွှင်မှုရှာဖွေနည်း သို့ ရယူနည်း ယုံရင်ဖတ် မယုံရင်မဖတ်နဲ့
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနှင့် ပြသနာတစ်ရပ်။ရဲရင့်ခေါင် ။
ဂြိုလ်သားနဲ့ တူတဲ့ လူသား
တိမ်ရဲ့ အိန်ဂျယ် (ဘလော့ဂ်ဂါ မိုးငွေ့အတွက် မွေးနေ့က...